The Score(2001) The Score(2001) IMDb....6.8,,,,Rotten...73% ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင် Robert De Niroနဲ့Edward Norton, တို့ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးမိတ်မဆက်ပေးတော့ဘူး....ကျွန်တော်ကတော့Edward Norton ကို Primal Fear ကားထဲမှာ ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်ကို လေးစားမိသွားတာ... Robert De Niro ကတော့ HEAT ဆိုတဲ့ကားထဲမှာ.... နစ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တန်ဘိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးတဲ့နေရာမှာ သိပ်တော်တယ်. ..အစီအစဉ်ကောင်းတွေဆွဲတယ်...အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရှိတယ်. ..ခိုးခဲ့တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာလည်း အထိအခိုက် အသေအကျေမရှိအောင်ဂရုစိုက်တယ်.. ..သူဟာ ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျင်လည်နေတာ အတော်ကြာပြီ.. ..တစ်နေ့မှာတော့ ဂျက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က အချီကြီးချလို့ရမယ့် ပွပေါက်တစ်ခုလာပြောရင်း သူနဲ့ပူပေါင်းပါရစေလို့တောင်းဆိုတယ်...ဂျက်က လူငယ်ဆိုပေမယ့် အတော်ဥာဏ်များတယ်. ..သွေးလည်းဆူတယ်...သူတို့(၂)ယောက်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ.. ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ အနှောင့်အယှက်တွေပေါ်လာမလဲဆိုတာတော့...... ကိုင်းပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီကားက သူခိုးကားတွေထဲမှာ အတော်လေးကိုလန်းတယ်. ...၂၀၀၁ကဆိုပေမယ့် ကြည့်လို့ကောင်းနေဆဲပါ..မင်းသားကြီး (၂)လက်ကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့လေ. ..ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့... File Size : (850 MB) and (360 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:04:00 Genre : Crime, Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by SCRN Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 6.8/10 109,219 votes
Blow (2001) မင်းသားကြီးဂျွန်နီဒပ်နဲ့ မင်းသမီးကြီး ပင်နီလုပ့်ခရုဇ်တို့ပါဝင်ထားပြီးအမေရိကန် ကိုကိန်းရောင်းဝယ်ရေးသမား George Jung ရဲ့ ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။Biography, Crime, Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb (7.6) ထိရရှိထားပါတယ်။ File size…(999 MB) and (460 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:04:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by OWL
IMDB: 7.6/10 215,791 votes
Black Hawk Down (2001) Black Hawk Down (2001)IMDb - 7.7/10_____Rotten - 76%Won2Oscars. Another9wins & 37 nominationsဆိုမာလီနိုငျငံဟာ ၁၉၉၀ဝနျးကငျြက ငတျမှတျမှုကွောငျ့ပွညျသူသုံးသိနျးကြျောသဆေုံးခဲ့ပါတယျအကွောငျးရငျးကတော့ ယခုထိတိုငျမပွီးဆုံးနိုငျသေးတဲ့တဈနိုငျငံထဲနမြေိုးနှယျစုတှအေခငျြးခငျြးဖွဈပှားတဲ့ ကာလရှညျပွညျတှငျးစဈကွောငျ့ဖွဈပါတယျဆိုမာလီယာအစိုးရဟာ မထိနျးခြုပျနိုငျပဲငါတလူမငျးမူနတေဲ့ ခေါငျးဆောငျတှကွေားမှာMohamed Farrah Aididဟာ အာဏာအရှိဆုံးဖွဈခဲ့ပွီးထိုအခြိနျက မွို့တျောမိုဂါဒဈရှူးကို အုပျစိုးခဲ့ပါတယျနိုငျငံတကာကထောကျပံတဲ့ရိက်ခာ အထောကျအပံတှကေိုငတျမှတျနတေဲ့ပွညျသူတှဆေီမဝငေပဲ အရကျစကျဆုံးထငျရာဆိုငျးမငျးမူနတေဲ့Aididကိုဖယျရှားပဈမယျ အစီအစဉျတှထေဲကတဈခုကို၁၉၉၃ခုနှဈအတှငျး မွို့တျောမိုဂါဒဈရှူးမှာ ထုံးစံအတိုငျးအမရေိကနျတို့ လုပျခဲ့ပါတယျAididအစိုးရအဖှဲ့ရဲ့အစညျးအဝေးတဈခုကိုဝငျစီးကာ ဝနျကွီးတှကေိုဖမျးဖို့ဖွဈပွီးတဈနာရီအတှငျးအပွီးသတျဖို့စနဈတကြ စီစဉျထားတဲ့စဈဆငျရေးဟာAididစဈတပျရဲ့ မထငျမှတျတဲ့ အပွငျးအထနျခုခံမှုတှကွေောငျ့ဘလကျဟော့ဟယျရီကျောပတာ တှပေကျြကမြှုမှစတငျကာ အလှဲလှဲခြျောချြာဖွဈပွီးအမရေိကနျစဈတပျဟာ အခြိနျမှီမွို့ထဲကပွနျမထှကျနိုငျပဲ ပိတျမိကာတဈရကျနီးပါးကွာမွငျ့သှားပါတယျဒီဇာတျကားဟာထိုအခါက အမရေိကနျနဲ့ဆိုမာလီတှရေဲ့ အပွငျးအထနျတိုကျခဲ့ကွပုံတှစေဈရဲ့မာနျ စဈရဲ့ဓလနေဲ့ စဈရဲ့ကွကှေဲဖှယျရာတှကေို အပီပွငျဆုံးရိုကျကူးပွထားပွီးအကယျဒမီဆုတှကေို သိမျးပိုကျသှားခဲ့တဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျImdb 7.7နဲ့ RT 76%ထိရရှိထားပွီး စဈကားဆိုမှစဈကားကိုကွိုကျတဲ့သူတှအေနနေဲ့ကွညျ့ဖူးတဲ့စဈကားတှထေဲမှာ ဒီကားမပါသေးရငျအမွနျဆုံးသာ download လုပျလိုကျပါလို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျဆိုမာလီနိုင်ငံဟာ ၁၉၉၀ဝန်းကျင်က ငတ်မွတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ ယခုထိတိုင်မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့တစ်နိုင်ငံထဲနေမျိုးနွယ်စုတွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ကာလရှည်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမာလီယာအစိုးရဟာ မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲငါတလူမင်းမူနေတဲ့ ...
IMDB: 7.7/10 354,986 votes
Mr. Bones(2001) Mr.Bone (2001)မြန်​မာစာတန်းထိုး ========================90's Born ​တွေ​တော်​​တော်​များများ နဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့ ဟိုး ဗီဒီယိုတိတ်​ နဲ့ ​ခေတ်​ကထဲ ကဂျီးကပ်​ မှိုတတ်​​နေတဲ့အ​ခွေကို ဘာသာစကားနားမလည်​ပဲကြည့်​တာ​တောင်​ အူတက်​မတတ်​ ခွီခဲ့ရတဲ့အာဖရိက ​ရောက်​လူဖြူကြီး Mr.Bone ရဲ့မင်းသားရှာပုံ​တော်​ ခရီးကို တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ဇာတ်​ကားက Comedy မှာ စွန်း ​ဖောက်​တဲ့ ကားမို့ဇာတ်​​ကြောင်းအ​ထွေအထူး​ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်​မိပါတယ်​ဒီကားကို ဒါရို​က်​တာ Gray Hofmeyr က ရိုက်​ကူးထားပြီးGoogle ကို​ခေါက်​ကျိမယ်​ဆိုရင်​ ၉၇% ​သောသူ​တွေကဒီကားကို ကြိုက်​နှစ်​သက်​ကြပါတယ်​တဲ့ဗျာကဲ သင်္ကြန်​ပိတ်​ရက်​မှာ ဒီဟာသကား​လေးကိုကြည့်​ ​စိတ်​အ​မော​တွေ​ဖြေ​ဖျောက်​ပြီးနှစ်​သစ်​ကို ​ပျော်​ရွှင်​စွာနဲ့ ဖြတ်​သန်းလိုက်​ကြရ​အောင်​လားဗျာTranslator က မမဖြူသန့်​ဖြစ်​ပြီး​တော့Encoder က​တော့ Kyaw Ye Aung ပါလင့်​ကို ကွန်​မန်းမှာရယူ​ပေးပါ​နော်​
IMDB: 4.7/10 2,216 votes
Jurassic Park III (2001) Jurassic Park3ကို ဒါရိုက်တာJoe Johnston ကရိုက်ကူးထားပြီး 2001 ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ခဲ့ပါသည်။ IMDb 5.9 နှင့် RT 50% သာရရှိထားသော်လည်းGoogle user 86% က Like ပေးထားကြသည်။ ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားမှ ဒေါက်တာအလန်ဂရန့်(သတ္တရုပ်ကြွင်းပညာရှင်) လည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယဇာတ်ကားတွင် တိုင်ရန်နိုဆောရပ်စ်အမျိုးအစားဒိုင်နိုဆောများက သားပျောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့ပုံကိုရိုက်ကူးထားပြီး ဤဇာတ်ကားတွင်မူ လူသားမိဘများက သားပျောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့ပုံကို ရိုက်ကူးထားသည်။ ယနေ့အချိန်ထိ ဒိုင်နိုဆောတို့၏ပြင်ပအရောင်အသွေးများကို တိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်ကြသေးပေ။ ပတ်ဝန်းကျင်အရောင်ကိုလိုက်၍ အရောင်ပြောင်းနိုင်ကြသည်ဟူ၍သာ ယေဘုယျလက်ခံထားကြသည်။ ဤဇာတ်ကားတွင် ဒိုင်နိုဆောများ၏ အရောင်ကိုပြောင်းလဲရိုက်ကူးထားရုံမျှမကဘဲ အသားစားဒိုင်နိုဆောများထဲတွင် အရွယ်အစားအကြီးဆုံးဖြစ်သော စပိုင်နိုဆောရပ်စ်နှင့် ဒိုင်နိုဆောခေတ် ငှက်များကိုပါ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထား သောကြောင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ အသက်၁၃နှစ်အရွယ်အဲရစ်သည် အမေ၏မိတ်ဆွေ ဘန် နှင့်အတူ မော်တော်ဘုတ်ဆွဲ လေထီးစီး၍ ဆော်နာကျွန်းရှိဒိုင်နိုဆောများကို ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ကူးရန်ကြိုးစားခဲ့ကြရင်းဆော်နာကျွန်းပေါ်သို့ လေထီးဖြင့် ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်။ အဲရစ်၏မိဘများ ဖြစ်ကြသော မစ္စတာကာဘီနှင့် အမန်ဒါတို့က အဲရစ်ကိုရှာဖွေရန်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ဒေါက်တာအလန်ဂရန့်ကို မလိမ့်တပတ်လုပ် ခေါ်ဆောင်ကာ ဆော်နာကျွန်းသို့ခရီးနှင်ခဲ့ကြသည်။ အဲရစ်နှင့်ဘန်ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား ...
IMDB: 5.9/10 244,839 votes
The Mummy Returns (2001) IMDb (6.3/10)..Rotten Tomatoes (47%)Unicode1999 ကထှကျခဲ့တဲ့ The Mummy ဇာတျကားရဲ့အဆကျအနနေဲ့ရိုကျကူးတငျဆကျထားတာပါ။ပထမဇာတျကားက ဇာတျကောငျ မငျးသားမငျးသမီးတှပေဲ ဆကျလကျပါဝငျခဲ့ပွီး ကငျးမွီးကောကျဘုရငျကွီး Mathayus အဖွဈ Dwayne Johnson မှပါဝငျထားပါတယျ။Action, Adventure, Fantasy အမြိုးအစားဇာတျကားဖွဈပွီး ပထမ Mummy ဇာတျကားကိုကွညျ့ဖူးထားရငျတော့ အဆကျအစပျရှိစှာ ခံစားကွညျ့ရှုနိုငျမှာပါ...ပွနျလညျနှိုးထလာတဲ့ ကြိနျစာသငျ့ Mummy တို့စုံတှဲနဲ့ ကွေးစားစဈသားကွီး အိုကျောနယျတို့စုံတှဲ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ရာမှာ ကြိနျစာတှကေို ဘယျလိုပယျဖကျြမလဲဆိုတာ........။(ဘာသာပွနျထားသူကတော့ Min Thet Oo ဖွဈပါတယျ။)Zawgyi1999 ကထွက်ခဲ့တဲ့ The Mummy ဇာတ်ကားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။ပထမဇာတ်ကားက ဇာတ်ကောင် မင်းသားမင်းသမီးတွေပဲ ဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကင်းမြီးကောက်ဘုရင်ကြီး Mathayus အဖြစ် Dwayne Johnson မှပါဝင်ထားပါတယ်။Action, Adventure, Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ပထမ Mummy ဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးထားရင်တော့ အဆက်အစပ်ရှိစွာ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ...ပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့ ကျိန်စာသင့် Mummy ...
My Sassy Girl (2001) My Sassy Girl (2001)_____IMDb - 8.0/10 ဒီဇာတျကားက ၂၀၀၁ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားကားဖွဈပွီး မငျးသမီး Jun Ji‑hyun မငျးသား Cha Tae‑hyun တို့အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ သရုပျဆောငျဆိုတာ ဒါမြိုးကိုးလို့စံထားရလောကျအောငျ ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသားရော မငျးသမီးရော အသကျဝငျအောငျ သရုပျဆာငျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဆုတှတေသီကွီးရခဲ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး Hollywood ကတောငျ ပွနျရိုကျခဲ့ရတဲ့အထိနာမညျကွီးလူကွိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။ K-Drama တှနောမညျကွီးလာဖို့ စတငျထိုးဖောကျခဲ့ကွတဲ့ဇာတျကားတှထေဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုတှပွေောနလေို့ ဇာတျကားကကွီးကယျြလှခညျြလားမထငျပါနဲ့။ သာမနျအခဈြဇာတျလမျးလေးပါပဲ..ဘာ Effect မှလဲ သုံးပွီးမရိုကျကူးထားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရငျထဲစှဲမွဲကနျြခဲ့ရပါတယျ။ (ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့ပွီး နညျးပညာမတိုးတကျလို့ ရုပျရှငျအရညျအသှေးနိမျ့ပါးနတောလို့ ပွောတတျတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေို ဟားတိုကျရယျမောမိပါတယျ။) IMDb Rating (8.0/10) ရရှိထားတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ဇာတျကားပါ။ ကွညျ့ပွီးသားလို့ ကြှနျတေျာ့ကိုပွောကွရငျ ကြှနျတျောက နောကျတဈခေါကျပွနျကွညျ့ပါ မပငျြးစရေဘူးလို့ အာမခံပေးလိုကျပါတယျ။ သိမျးထားလို့ရအောငျ 720p Bluray Rip Quality နဲ့တငျပေးထားပါတယျ။ File size...(1.1 GB) Quality...Blu-ray Rip 720p Format...mp4 Duration....02:17:00 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder....Nyeinsaeya Aung နမူနာကွညျ့ရနျ
IMDB: 8.0/10 44,379 votes
Friend (2001) ဂျွန်ဆုတ် ,ဒုန်ဆု ,ဂျန်ဟို နဲ့ ဆန်တစ် တို့ ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အတူဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ...သူတို့ထဲမှာမှ ဂျွန်ဆုတ်နဲ့ ဒုန်ဆုတို့ ဟာ ကျောင်းမှာ ကလန်ကဆန်လူဆိုးလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်...နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးဆက်တက်ခဲ့ကြပေမယ့်....ဂျွန်ဆုတ်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီး ဒုန်ဆုကတော့ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်....ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့် ဒုန်ဆုနဲ့ သိပ်အစေးမကပ်တော့ပါဘူး...ဒါကြောင့် ကျန်သူငယ်ချင်းသုံးဦးသာ အတူတွဲနေမိကြတာပေါ့..ဖြစ်ချင်တော့ ဒုန်ဆု ဦးစီးတဲ့ ဂိုဏ်းဟာ ဂျွန်ဆုတ်အဖေတို့ ဂိုဏ်းနဲ့ ရန်ဘက်ဂိုဏ်းဖြစ်တာမို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကြား အထင်လွဲမှားမှုတွေစတင်လာခဲ့ပါတယ်....ဂျွန်ဆုတ်ကလည်း သူတို့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကို ဒုန်ဆုက လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ သံသယဝင်ခဲ့ပြီး...ကျန်တဲ့ဂိုဏ်းသားတွေကလည်း ဒုန်ဆုကို ပြန်လည်လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ အခါမှာတော့....CMကမကြာခင်တင်ဆက်ထားတဲ့ Friend2ရဲ့ ရှေ့ကားဖြစ်ပါတယ်....ဂိုဏ်းစတားကားတွေထဲမှာ အတော်လန်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ အပြင် ဒုန်ဆုအဖြစ် ဒါရိုက်တာရင်က သရုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့် လက်လွတ်မခံဘဲကြည့်သင့်ပါကြောင်း File Size : (950 ...
IMDB: 7.6/10 506,270 votes
Jeepers Creepers (2001) Jeeper Creeper ဇတ်​ကားဟာဆိုရင်​ 2001ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိခဲ့တဲ့ အ​မေရိကန်​Horrorဇာတ်​​ကား​ကောင်းတစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​။2001ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိခဲ့တယ်​ဆို​ပေမယ့်​ တကယ့်ကို Horror ဆန်ပြီး ကြည့်ရှုသူတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုရသအပြည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် အောင်​မြင်​လူကြိုက်​များခဲ့လို့ အပိုင်း2နဲ့အပိုင်3းကို ဆက်​လက်​ရိုက်​ကူးခဲ့ပါတယ်​။1938မှာ​ကျော်​ကြားခဲ့တဲ့ Jeeper Creeperသီချင်းကို ယူပြီးဇာတ်​ကားထဲမှာ ရိုက်​ကူးခဲ့ပါတယ်​။Horrorကား​တွေကြိုက်​တဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေ​တော့တကယ်ကိုကြည့်​သင့်​ဇာတ်​လမ်း​ကောင်းပါ။Jeeper Creeper ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကြီးဟာ နှစ်အပိုင်းအခြားတစ်ခုရောက်တိုင်း လူလောကကိုလာပြီး လူတွေကိုသတ်ဖြတ်စားသောက်တဲ့ သတ္တ၀ါကြီးတစ်ကောင်ပါ။သူဘယ်သူလဲဆိုတာသေချာမသိရသလို သတ်ဖြတ်စားသောက်တယ်ဆိုတာလည်း သူ့ကိုယ်သူပြန်လည်လာရောက်တည်ဆောက်တဲ့သဘောပါ။သတ်တဲ့အခါမှာလည်း တွေ့သမျှ လူတိုင်းကို သတ်လေ့မရှိဘဲ လူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုအခြေခံထားပြီး သတ်လေ့ရှိတာပါ။ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက တကယ်ကိုအသက်ပါပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရမှာမို့လို့ Horror ပရိသတ်တွေသေချာပေါက် ကြိုက်ကြမှာပါ။အားပေးကြလွန်းလို့ နောက်ထပ် ၂ကားပါဆက်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့……..​နွေရာသီအားလပ်​ရက်​​တွေမှာ ဒယ်​ရီနဲ့သရစ်​ရှာ​တို့​မောင်​နှမနှစ်​​ယောက်​ဟာ အိမ်​ကိုပြန်​လာခဲ့ကြပါတယ်​။လမ်းမှာ ကားတစ်​စီးနဲ့တိုက်​မိမလိုဖြစ်​ပြီး အဲ့ကား​ကိုမောင်းတဲ့သူက လမ်းမကြီး​​ဘေးမှာရှိတဲ့ ဘုရား​ကျောင်းအိုကြီးထဲကို ပိုက်​လုံး​တွေထဲက​နေ လူ​သေအ​လောင်းကိုပစ်​ချ​နေတာ​တွေ့လိုက်​ကြတယ်​။အဲ့မှာ သူတို့​မောင်​နှမ နှစ်​​ယောက်​ကစိတ်​ဝင်စားပြီးသွားကြည့်​တဲ့အခါမှာ​တော့ လူ​သေအ​လောင်း​တွေကိုတစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​သီပြီးဘုရား​ကျောင်းနံရံ​တွေမှာချုပ်​ထားတာ​တွေ့လိုက်​ရပါတယ်​။အဲ့မှာတင်​ပဲ ​မောင်​နှမနှစ်​​ယောက်​ဟာ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့လမ်း​ဘေးစား​သောက်​ဆိုင်​ကို​သွားပြီးရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်​အ​ကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်​။အဲ့မှာအမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ဖုန်းဝင်​လာပြီး၊ ...
IMDB: 6.1/10 96,317 votes
The Others (2001) The Others (2001)IMDb - 7.6/10_____Rotten - 83%"The others" ရုပျရှငျဟာ 2001ခုနှဈမှာစတငျဖွနျ့ခြိခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ-ပွငျသဈသဘာဝလှနျသညျးထိတျရငျဖိုဇာတျကား ဖွဈပါတယျ။IMDBအနနေဲ့ 7.6/10ကိုရယူထားပွီး Rotten Tomatoကတော့83%ပါ။ဒါရိုကျတာဖွဈသူ Alejandro Amenabarကရိုကျကူးထားပွီး အဓိကဇာတျကောငျတှအေဖွဈ Nicole Kidman Fionnula Flanagan Christopher Eccleston Elaine Cassidy Eric Sykes Alakina Mann James Bentleyစတဲ့သူတှကေ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ဒီဇာတျကားရဲ့ကုနျကစြရိတျဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ 17မီလီယံဖွဈပွီး ရုံတငျဝငျငှကေ 209.9မီလီယံဒျေါလာဖွဈပါတယျ။အမရေိကနျနဲ့ ကနဒေါမှားတငျရုံတငျတဲ့ပထမအပတျမှာတငျ 14မီလီယံဒျေါလာကိုရရှိခဲ့ပွီး ရုံတငျဝငျငှအေမြားဆုံးနံပါတျ4နရောမှာ နောကျထပျသုံးပတျတိတိရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ Goya Award for Best Film Goya Award for Best Director Goya Award for Best Original Screenplay Goya Award for Best Sound Goya Award for Best Art Direction Goya Award for Best Editing Goya ...
IMDB: 7.6/10 327,692 votes
Behind Enemy Lines (2001) အရမျးကွိုကျပွီး ခဏခဏပွနျကွညျ့မိတဲ့ဇာတျကားမို့ CM ပရိသတျအတှကျ တငျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီကားက IMDb Rating 6.4 ရထားပွီး Box office မှာ 92 million ဝငျခဲ့ပွီး အဲဒီအခြိနျက ဟယျရီပျေါတာရဲ့မှျောကြောကျတုံးဇာတျကားပွီးရငျ ဒီကားက လူကွညျ့အမြားဆုံးဒုတိယနရောကိုယူခဲ့ပါတယျ။ ဆုအနနေဲ့ကတော့ World Stunt award-2002 မှာ Best Aerial Award ဆုရခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးလေးက တကယျ့ဖွဈရပျမှနျအပျေါ အခွခေံပွီး ရိုကျထားတာပါ။ ၁၉၉၅ ခုနှဈ ဘော့စနီးယားမှာလယောဉျပဈခခြံခဲ့ရပွီး ၆ ရကျတာ ရနျသူ့နယျမွမှောပွေးလှားခဲ့ရတဲ့ အမရေိကနျပိုငျးလော့ဒျတဈဦးအကွောငျးပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးအနနေဲ့ ၁၉၉၅ မှာ ဘော့စနီးယားမှာပွညျတှငျးစဈပှဲတှဖွေဈပှားနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီစဈမီးငွိမျးဖို့ နရောတကာပါတဲ့ NATO တပျဖှဲ့ကလညျး ပါလာရပါပွီ။ စဈပွငွေိမျးရေးသဘောတူညီခကျြတှေ ခြုပျဆိုပွီးလို့ NATO တပျတှလေညျး ဆုတျခှာခါနီးနပေါပွီ။ NATO အဖှဲ့ဝငျဖွဈတဲ့ အမရေိကနျ Navy ကလညျးလယောဉျတငျသင်ျဘောတှနေဲ့ ပငျလယျပွငျက စောငျ့ကွညျ့နပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့တာဝနျကတော့ ဘော့စနီးယားပျေါကို သတျမှတျထားတဲ့လမျးကွောငျးကနေ ပွညျတှငျးအခွအေနကေို ဝဟေငျကနမှေတျတမျးတငျ ဓါတျပုံရိုကျကူးဖို့ဖွဈပါတယျ။ ခရစ်စမတျနေ့ အားလပျရကျတာဝနျအနနေဲ့ ပိုငျးလော့ဒျစတကျဟောကျ နဲ့ သူရဲ့လကွေောငျးလမျးပွဗိုလျ ဘားနကျတို့ ဒဈဂဈြတယျကငျမရာအသဈစကျစကျတပျဆငျထားတဲ့ F-18 တိုကျလယောဉျနဲ့ဘော့စနီးယားဝဟေငျကို သတျမှတျထားတဲ့လမျးကွောငျးအတိုငျး လိုကျလံစဈဆေးနခေဲ့တယျ။ မောငျးနှငျနရေငျး ...
IMDB: 6.4/10 97,018 votes
[18+] Summertime (2001) File Size…(700MB) and (410MB)Quality…DVDripFormat…mp4 Duration…01:44:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…RGBTranslated by MKK
[18+] Summertime (2001)
Swordfish (2001) Rogue agent Gabriel Shear is determined to get his mitts on $9 billion stashed inasecret Drug Enforcement Administration account. He wants the cash to fight terrorism, but lacks the computer skills necessary to hack into the government mainframe. Enter Stanley Jobson,an'er-do-well encryption expert who can log into anything.၂၀၀၁ ထွက် အက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးမှာ လိုဂန် အဖြစ် လူသိများတဲ့ Hugh Jackman က ...
Not Another Teen Movie (2001) ကဲအားလုံးပဲစောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ChrisEvansပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့အမရေိကနျကြောငျးသားဟာသကားအမွူးလေးပါ။ ၂၀၀၀ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့ပွီးBoxOffice 66.5သနျးရရှိခဲ့ပါတယျ။ American Pieကားတှလေိုမြိုးကြောငျးသားလူငယျဟာသကားဆိုတဲ့အတိုငျး၁၈++လေးတှပေါဝငျတယျ။ ရယျလညျးရယျရတယျပေါ့နျော။ဇာတျလမျးလေးကတော့ ဂြှနျဟူးဆိုတဲ့အထကျတနျးကြောငျးလေးမှာအခွတေညျထားတာပါ။ ကြောငျးမှာနာမညျကွီးCheerleaderဖွဈတဲ့ပရဈဆယျလာနဲ့တှဲနတေဲ့ကြောငျးနာမညျကွီးဘောလုံးကစားသမားဖွဈတဲ့ ဂြိတျချဝိုငျလာ(ChrisEvans)တယောကျရုတျတရတျအခွားအူကွောငျကွောငျကြောငျးသားတယောကျကွောငျ့ရညျးစားဖွတျတာခံလိုကျရပါတယျ။ အဲဒါနဲ့ဂြိတျချရဲ့သူငယျခငျြးတယောကျဖွဈသူကကြောငျးမှာရိုးအအလူရာသိပျမသှငျးတဲ့ကြောငျးသူတယောကျကိုQueenဖွဈအောငျလုပျပေးဖို့လောငျးကွေးထပျပါတယျ။ အဲဒီကစပွီးဂြိတျတယောကျဂနြေီဘရဈဆိုတဲ့ကောငျမလေးနဲ့နီးစပျဖို့အမြိုးမြိုးကွံပါတော့တယျ။ သို့ပမေယျ့ကွားထဲမှာသူ့ကိုဇှတျကွိုကျခငျြနတေဲ့အဈမဖွဈသူကတျသရငျးရော၊ဂနြေီရဲ့လူမသိသူမသိအခဈြဆုံးသူငယျခငျြးရဈကီလဈမနျးရော၊ သူ့ရဲ့အတိတျကဘောလုံးပှဲအတိတျဆိုးတှကေပါအနှောငျ့အယှကျပေးနခေဲ့တာကွုံနရေပါတယျ။ အဈမဖွဈသူကတျသရငျးကတော့သူ့မောငျကိုတဖွေးဖွေးကူညီပေးရငျးဂနြေီကိုပုံစံလုံးဝပွောငျးပေးပွီးအလနျးလေးလုပျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီကွားထဲဂနြေီရဲ့မောငျလေးမဈချြနဲ့သူ့သူငယျခငျြးတှရေဲ့ပေါကျကရလုပျတာတှဟောသတှအေမရေိကနျကြောငျးသား ဟာသကားတှရေဲ့ထုံးစံတှလေိုပေါကျကရတှလေုပျတာတှေ[(၁၈+)တှလေညျးပါတာပေါ့နျော] လူငယျဆနျဆနျပုံစံတှကေိုလညျးတှရေ့မှာပါ။ကွညျ့ရတာတနျစမှောဖွဈပွီညအေးဆေးအခြိနျထိုငျခှီလိုကျရအောငျဗြာ။ဇာတျကားကတော့စစခငျြးကိုခှီရမှာငိငိ။ ဆိုတော့နောကျပိုငျးကြှနျတျောတို့ဇာတျလိုကျကွီးChirsEvanဘယျလိုအခှီတှနေဲ့ရှေ့ဆကျမလဲဆိုတာတော့ဇာတျကားကိုအဆုံးထိကွညျ့လိုကျရအောငျဗြာ (အဆုံးသတျမှာပါသေးတယျနျော)။ (ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ.ဘာသာပွနျသူကတော့ Fridays ပဲဖွဈပါတယျ) ---------------------------------------------------------------------------------- ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ChrisEvansပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသားဟာသကားအမြူးလေးပါ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးBoxOffice 66.5သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ American Pieကားတွေလိုမျိုးကျောင်းသားလူငယ်ဟာသကားဆိုတဲ့အတိုင်း၁၈++လေးတွေပါဝင်တယ်။ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဂျွန်ဟူးဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းလေးမှာအခြေတည်ထားတာပါ။ ကျောင်းမှာနာမည်ကြီးCheerleaderဖြစ်တဲ့ပရစ်ဆယ်လာနဲ့တွဲနေတဲ့ကျောင်းနာမည်ကြီးဘောလုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဂျိတ်ခ်ဝိုင်လာ(ChrisEvans)တယောက်ရုတ်တရတ်အခြားအူကြောင်ကြောင်ကျောင်းသားတယောက်ကြောင့်ရည်းစားဖြတ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ဂျိတ်ခ်ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်သူကကျောင်းမှာရိုးအအလူရာသိပ်မသွင်းတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကိုQueenဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လောင်းကြေးထပ်ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီးဂျိတ်တယောက်ဂျေနီဘရစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့နီးစပ်ဖို့အမျိုးမျိုးကြံပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့်ကြားထဲမှာသူ့ကိုဇွတ်ကြိုက်ချင်နေတဲ့အစ်မဖြစ်သူကတ်သရင်းရော၊ဂျေနီရဲ့လူမသိသူမသိအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရစ်ကီလစ်မန်းရော၊ သူ့ရဲ့အတိတ်ကဘောလုံးပွဲအတိတ်ဆိုးတွေကပါအနှောင့်အယှက်ပေးနေခဲ့တာကြုံနေရပါတယ်။ အစ်မဖြစ်သူကတ်သရင်းကတော့သူ့မောင်ကိုတဖြေးဖြေးကူညီပေးရင်းဂျေနီကိုပုံစံလုံးဝပြောင်းပေးပြီးအလန်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲဂျေနီရဲ့မောင်လေးမစ်ခ်ျနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပေါက်ကရလုပ်တာတွေဟာသတွေအမေရိကန်ကျောင်းသား ဟာသကားတွေရဲ့ထုံးစံတွေလိုပေါက်ကရတွေလုပ်တာတွေ[(၁၈+)တွေလည်းပါတာပေါ့နော်] လူငယ်ဆန်ဆန်ပုံစံတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ကြည့်ရတာတန်စေမှာဖြစ်ပြီညအေးဆေးအချိန်ထိုင်ခွီလိုက်ရအောင်ဗျာ။ဇာတ်ကားကတော့စစချင်းကိုခွီရမှာငိငိ။ ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဇာတ်လိုက်ကြီးChirsEvanဘယ်လိုအခွီတွေနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကားကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ (အဆုံးသတ်မှာပါသေးတယ်နော်)။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ Fridays ပဲဖြစ်ပါတယ်)File Size : 752 MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 29minutes Format : Mp4 Genre : Comedy,Adult Translator : Fridays Encoder :Thanhtike Zaw